निर्वाचनमा पराजीत उम्मेदवार पनि राष्ट्रियसभामा ! - Jhilko
निर्वाचनमा पराजीत उम्मेदवार पनि राष्ट्रियसभामा !
६ पुष,२०७६ 128 0
१८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको १८ सिटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो तर्फबाट १६ जना उम्मेदवार अगाडि सारेको छ । दुई सिट राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई समर्थन गरेको छ ।
राष्ट्रियसभामा साविक एमालेबाट नौ र साविक माओवादी केन्द्रबाट सात जना उम्मेदवार खडा भएका छन् ।
प्रदेश एकबाट तीन जना उम्मेदवारमध्ये साविक एमालेबाट दुई जना र साविक माओवादी केन्द्रबाट एक जना उम्मेदवार खडा भएका छन् । पूर्व एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल र इन्दु गौतम छन् भने पूर्व माओवादी केन्द्रबाट गोपी अछामी उठेका छन् ।
अछामी र दाहाल उठेको सिटमा यसअघि राष्ट्रियसभामा साविक एमालेका खेम नेपाली र हरिचरण शिवाकोटीले जितेका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले जितेको ठाउँमा गौतमलाई उठाइएको छ ।
प्रदेश दुईमा अरुले जितेको ठाउँमा नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेर निर्वाचन उठाएको छ । यहाँ साविक एमालेबाट तुलसा दाहाल र साविक माओवादीबाट राधेश्याम पासवानलाई उठाइएको छ ।
प्रदेश तीनमा साविक एमालेबाट बेदुराम भुसाललाई र साविक माओवादी केन्द्रबाट गंगा बेल्बासेलाई उठाइएको छ । बेदुराम यसअघिको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सिफारिस भएर पनि अन्तिममा नाम काटिएका ब्यक्ति हुन भने गंगा बेल्बासे गत वर्ष निधन भएका पूर्व शिक्षामन्त्रीकी जीवन संगिनी हुन ।
प्रदेश चारमा साविक माओवादीबाट पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खडा भएका छन् भने भगवती न्यौपाने साविक एमालेबाट उठेकी छिन् ।
प्रदेश ५ महिलाबाट विमला घिमिरे, अपाङ्गता र अल्पसंख्यकबाट जगप्रसाद शर्मा र अन्यबाट गोपाल भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको छ। शर्मा साविक माओवादी र घिमिरे र भट्टराई साविक एमालेबाट उठेका हुन ।
कर्णाली प्रदेशबाट अन्यमा मायाप्रसाद शर्मा, महिलाबाट सुमित्रा विसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्यमा तारामान स्वाँर, महिलाबाट शारदा भट्टलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय नेकपाले गरेको छ। मायाप्रसाद र तारामान स्वाँर साविक माओवादी केन्द्र र बिसी र भट्ट साविक एमालेबाट उठेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि दुवै सिट साविक माओवादी केन्द्रबाट जितेका थिए । कालीबहादुर मल्ल र युटोल लामाले जितेका थिए ।
माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २० गते मनोनयन हुँदैछ। बिहीवार पनि उम्मेद्वार तयका लागि छलफल भएकोे थियो। तर, टुंगो लागेको थिएन।
पहिला उम्मेदवार भएका पनि उम्मेदवार
गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा उठेर हारेकामा नारायणकाजी श्रेष्ठ र जगप्रसाद शर्मा मात्र छन् । श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा र शर्मा प्रदेशसभामा निर्वाचन हारेका थिए ।
‘ढुक्क हुनुस भेनेजुएला अर्को सिरिया बन्दैन’
५ चैत्र,२०७५0582
भेनेजुएलाका निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलास मदुरोका विरूद्ध अमेरिकाले गर्ने सैनिक हस्तक्षेपको...
२ पुष,२०७६046
संसद् सचिवालयको गाडी खरीदमा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिस
३ भदौ,२०७६0119
सङ्घीय संसद् सचिवालयको ११ वटा स्कारपियो जीप खरीदका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नबारे सांसद...
५ चैत्र,२०७५0324